QM oo ka dalbatay ka qeyb-galayaasha New deal in ay miiska saaran taageerada dhaqaale Soomaaliya – Radio Daljir
Seteembar 16, 2013 2:39 b 0
New York, September 16, 2013 – Qaramada midoobey ayaa rajo wanaagsan ka qabta shirka arrimaha Soomaaliya ee lagu qabanayo magaalada Brussels maanta oo Isniin ah, iyadoo Soomaaliya ay haatan ka jirto dowladd dhamaystirsan oo aan KMG ahayn.
Ergayga gaarka ah ee Qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay, ?ayaa sheegay in shirkan uu yahay mid ay ku tiirsan tahay rajada Soomaaliya ee dhanka horumarinta hay?adaha dowliga ah, ciidamada iyo maamul baahinta intaba.
Wuxuu sheegay in Qaramada midoobey ay dowladd buuxda u aqoonsan tahay Soomaaliya, isagoo intaas ku daray in wakhtigan la tix-gelinayo rabitaankeeda dhanka dhaqaalaha ah, Mr. Kay wuxuu rajo wanaagsan ?ka muujiyey ?in shirka laga soo saaro nooca natiijadii la filayey.
?Taageerada dhaqaale ee la siiyo Soomaaliya waa mid aad uga yar tan la siiyo Afghanistan, Mali iyo Ciraaq oo ka mid ah dalalka ay dagaaladu ragaadiyeen, laakiin Soomaaliya si wanaagsan ayey uga faa?ideysataa taageerada lasiiyo? ayuu yiri Mr. Kay
Ugu dambeyntii Nikcholas Kay wuxuu ka dalbaday ka qeyb-galayaasha shirka in miiska la soo saaro dhaqaalaha Soomaaliya loogu yaboohayo ee caalamku ku taageeray, wuxuu sheegay marka la eego dowladda dalka ka jirta in si wanaagsan loo maareyn doono lacagtaas.
Wakiilka Qaramada midoobey ee arrimaha Soomaaliya Nikcholas Kay wuxuu cadeeyey in haatan la isku halayn karo Bankiga dhexe ee Soomaaliya, maadama uu leeyahay qalab casri ah taas oo sahlaysa in la ogaado halka ay mareen adeegyada dhaqaale iyo lacagaha Bankiga ka baxa.